Ujeeddooyinka Suuqgeynta Digital B2014B ee 2, Miisaaniyadaha, Waxqabadyada iyo Caqabadaha | Martech Zone
Ujeeddooyinka Suuqgeynta Digital B2014B 2, Miisaaniyadaha, Hawlaha iyo Caqabadaha
Axad, Sebtembar 14, 2014 Axad, Sebtembar 14, 2014 Douglas Karr
Omobono kii ugu dambeeyay Maxaa Ka Shaqeeya Meesha cilmi baaris ayaa bixisa sawir muujinaya B2B suuqgeynta dhijitaalka ah ee 2014. Iyadoo lala kaashanayo Bulshada Suuqgeynta iyo Cilmi-baarista Goobaha, Waxay weydiiyeen 115 ganacsadeyaal waawayn oo ganacsato ah suuqgaynta dijitaalka ah ujeedooyinka, miisaaniyadaha, howlaha iyo caqabadaha. Warbixinta oo dhameystiran, oo ay ku jiraan natiijooyinka sahan, falanqeyn khabiir iyo talooyin, ayaa la daabici doonaa bishan. Si aad u hesho nuqulkaaga dhijitaalka ah isla marka la helo, fadlan iska qor goobta Omobono.
Waxyaabaha muhiimka ah ee laga helay warbixinta waa sida soo socota:
Ahmiyadaha Suuqgeynta B2B khadka tooska ah waa fikirka hoggaaminta, xiriirka macaamiisha iyo ka warqabka sumadda.
Miisaaniyadda Suuqgeynta B2B waxay si weyn u taageertaa suuq geynta dijitaalka ah 39% miisaaniyada suuq geynta guud.
Meelaha Suuqgeynta ee muhiimka ah B2B waa baraha bulshada iyo mobilada.
Caqabadaha Suuqgeynta B2B waxaa ka mid ah agab la'aan, qiyaasidda waxtarka iyo khibrad la'aanta gudaha.
Nusqaamaha Xirfadaha Suuqgeynta B2B waa Analytics & warbixinta, istaraatiijiyada & qorsheynta, iyo cilmi baarista & fikradaha.
Cabirka B2B Suuqgeynta ROI waxay sii ahaaneysaa caqabad, iyadoo kaliya 16% suuqleyda ay dareemayaan inay si sax ah u cabbirayaan soo noqoshada maalgashiga.
Soo koobid ka mid ah natiijooyinka muhiimka ah ee Omobono waa xogtan hoose:
Tags: b2bmiisaaniyadaha b2bsuuq geynta b2bsuuqgeynta b2bnashaadaadka suuq geynta b2bmiisaaniyadaha suuq geynta b2bcaqabadaha suuqgeynta b2bujeedooyinka suuq geynta b2bmudnaanta b2bb2b warbaahinta bulshadab2b fakir hoggaamineedinfographicomobono
12 Talaabo oo loogu talagalay Guusha Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada